बजेट ल्याउने तयारी तिब्र, वृद्धभत्ता बढ्लाकी नबढ्ला ? – Sodhpatra
बजेट ल्याउने तयारी तिब्र, वृद्धभत्ता बढ्लाकी नबढ्ला ?
प्रकाशित : १० जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:४५ May 24, 2021
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा सरकार बजेटको तयारीमा छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले अर्थका अधिकारीहरु धमाधम बजेट लेख्दै छन् ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटको आकार १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यो सिलिङभित्र रहेर अधिकांश पूराना आयोजनालाई बजेट छुट्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ ।
कोरोना भाइरसका कारण थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दाबी छ । सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य र कोरोनाले पारेको मर्कामा केन्द्रित रहेर बजेट लेख्ने काम भईरहेको छ ।
वृद्धभत्ता बढ्दै !